Bindu Stove Fekitori - China Bindu Chitofu Vagadziri, Vatengesi
Chitofu chebindu chitauro chakasiyana-siyana chakanakira kunze, chinogona kuunganidzwa uye kushandiswa nyore nyore pasina maturusi ehunyanzvi, izvo zvinoita kuti ive yakakodzera kushandiswa nevose. Kunyangwe iwe uchishandisa zvinodziya zvehuni mubindu, kumashure kana chero chiitiko chekunze, vanogona kuve wako wekubika naye neayo inoshanda mashandiro. Vaite chikamu cheupenyu hwako hwechigarire.
Iyo yepamusoro yekupisa yekuchinjisa ndiro yegadheni sitofu haigone kuumbika mushure mekudziya kwekushandisa kwenguva refu uye inozvirova bhavhu rinopisa rinobviswa kuti uve nemirazvo yakavhurika yekunanzva pasi pehari, kutonga kwakawanda pamusoro pekupisa kana uchibika uye kuramba uchibva kune unopfungaira yekubikira nharaunda.
- Yakareruka kutakura: 23.5 kg chete, kuti ugone kutakura, kuisa, uye kuiisa zvirinyore.
-Kushandisa kwakanyanya: Inopindirana kuti ugone kuwana huni hunopisa-huni kupisa mune chero nzvimbo yaunoda iwe.
- Misa kudziyisa: Yakanakisa yekuwedzera yekuwedzera yekuwedzera kune gadheni.
- akasiyana emafuta: Anogona ese kushandisa pellet uye yekutanga huni.
- Vataridzi vatatu: Nzwisisa zvizere murazvo unopfuta nemagirazi aya, zvinounza kwauri kunakidzwa kwekunakidzwa kwekunakidzwa kwekunzwa.
- Yakakwira inoshanda kupisa mwoto: Yakasanganiswa nehunhu hwekugona kwehuni, zvinoguma neyakajairika yekubika ruzivo, yakanyanya nguva yekutsva, uye shoma simba kutambisa.
- Inokodzera kubika: Yakagadzirira mumaminetsi mashoma yakati sandara. Inosvika tembiricha yakakwira mumaminetsi gumi neshanu uye inobika pizza yakavezwa nehuni mumaminetsi mashoma.
- Eco-inoshamwaridzika: Chitofu chekunze ichi chinopihwa simba ne eco-hushamwari huni kugadzira hunyengeri, hunopfungaira hwehuni hweovheni yakavezwa-yehuni - pamubhadharo wemutengo.
- Kushandisa zvakanyanya: kunobatsira iwe kubika hove zvakakwana, mapapiro ehuku, kugocha miriwo uye michero inopwanyika.
- Inyore kushandisa: Inogadzirisa inochinja mweya mweya wekupisa tembiricha ine ovhita thermometer yekutarisa kubheka.
- Nyore-kushandisa: Iyo yekunze huni yekupisira yakanaka kwazvo kana pasina gasi yemagetsi nemagetsi kutenderera uye zvakare iri nyore kwazvo kutakura.
- Inokodzera gadheni BBQ: Hauchadi kuti umirire nguva yako kuti ushandise grills yepaki, iwe nemhuri yako ndimi moga muchishandisa.
- Kushandisa zvakanyanya: Bvumidza iwe kuti ubike nyama yakawanda nemiriwo.
- Inokodzera kubika: Tora ushingi hwekunaka uye muto unonaka paunoshandisa iyi yekunze bbq.
- Yakasimba sevhisi: Yedu yekunze gogi yekupisira inoitwa kubva yesimbi ndiro ine yakanyanya tembiricha inodzivirira kupfeka kwehukuru hwakasimba.
- Wide-renji mukushandisa: Inopa yakakwira moto simba kutsva, yakaderera moto simba inoteedzera, kutsigira, kuchera, kudziyisa mvura uye kupisa mune imwechete unit.
- Yakasimba sevhisi: Shandisa yakakwira tembiricha inodzivirira kupfeka iyo inomira yakanyanyisa kupisa.
- Yekudhura-inoshanda kupisa: Ive yakanyatso gadzira inochengetedza yemukati mweya kutenderera sisitimu kuverengera padivi ovhiri kupisa.
- Kutsva zvakadzikama: Kune nzvimbo inokwana kubata matanda, inochengetedza moto kuenda kweawa.
- Yakakwana pakubika: Iva nenzvimbo inokwana nzvimbo yaunobika kanopfuura dhishi rimwe chete panguva imwe chete.
- Isina chiutsi: Iine hunyanzvi hweSekondari Kupisa Sisitimu, inoita kuti mwoto uzadze zvakanyanya uye unodzivirira hutsi zvakanyanya.
- Kudzivirirwa mukushandiswa: Dhizaini yemadziro emadziro inogona kudzivirira kupisa kwakanyanya kwemoto kune imwe nhanho.
- Yakasimba sevhisi: Kuvaka simbi ine yakanyanya-tembiricha inodzivirira, isina-peeling kupfeka. Iyo pellet moto gomba inogara-kwenguva refu, yakachengeteka & yakasimba.
- Kushandisa kwakanyanya: Iyo yakavakirwa-mudenderedzwa system muzasi uye kuvhura kwese kwese kunotendera yakanaka yemoto mweya. Yakakwana yenzvimbo yekunze.
- Dhizaini dhizaini: Inoratidzira yakasarudzika uye yakashongedzwa dhizaini iyo inowedzera iyo inozorodza mamiriro kune ekunze kushandiswa.
- Eco-inoshamwaridzika: Kwete chete mubiki wekunze uyu anoda mafuta mashoma, asi zvakare inopa utsi hushoma, zvichibatsira kuchengetedza nharaunda.
- Yakasimba sevhisi: Yakagadzirwa kubva kune simbi ndiro ine yakanyanya tembiricha inodzivirira kupfeka iyo ichachengetedza mhando yayo kwemakore anouya.
- Inoshanda uye haina Chiutsi: Iyo hombe kamuri yemafuta yechitofu yemusasa inobvumira kupisa kwenguva yakareba uye nekuwedzera kupisa kupisa apo uchigadzira hutsi hwakadzika.
- Nyore kushandisa: Hapana chikonzero chekutakura propane, gasi, kana mamwe mafuta newe. Bata chitsama chedanda uye gadzirira chikafu chakabikwa zvizere.
- Yakakwana michina yekudzika musasa: Inokodzera nguva dzese dzekunze dzechiitiko, inofanirwa-kuve neyako kambi giya.
- Inokodzera kubika: Iyo yepamusoro yepamusoro ndiyo yako yekubikira pamusoro, inogona kushandiswa kubika chero mhando yemhando yekicheni mukicheni yako.
- Yakasimba sevhisi: Yakagadzirwa nesimbi simbi ine yakanyanya tembiricha inodzivirira kupfeka, yakanaka munzvimbo dzakaomarara dzekunze.
- Yakanyanya kupisa kuburitsa: Inosvika tembiricha nekukurumidza, ichipa kudziya uye kupisa kune iyo nzvimbo panguva yekunze yekudzika musasa, inogona kumira kusvika ku600 ℃.
- Inosvikika uye inotakurika: 4 makumbo dhizaini mapapiro akazara pasi pekuputa hwevheni, chimney pombi zvikamu zvinomira mukati mechitofu muviri kuitira nyore kuchengetedza.
- Fuel inowanikwa: Iyi yekunze yekupisa matanda inoshandisa masosi masosi ehuni, senge huni, matavi emiti, matanda machipisi, nezvimwe.
- Yakanyanya kupisa: Firebox dhizaini inopa yakareba nguva yekupisa uye kunyangwe kupisa kupisa.
- Kuchengetedza nzvimbo: Makumbo ari kupetwa uye anokwana pasi pemuviri wechitofu kuti uchengetedze nyore.
- Yakachena uye yakapusa: Ash tireyi inopa kuita basa remadota, ita kuti kuchenesa kuve nyore.
- Fuel inowanikwa: Shandisa mafuta epanyama senge huni, matavi, machipisi ehuni, nezvimwe.
- Kuona girazi: Yakakwira tembiricha inodzivirira girazi windows inokutendera kuti unakirwe nekucherechedza moto uye kuongorora zvemukati pasina kuvhura musuwo, uchiwedzera mhepo yakanaka uye kudziya kwese.
Stainless Simbi Wood Masitovu Ekubika
- Wide-renji mukushandisa: Yakakwana iwe yekukunze kwekunze, inokupa iwe kudziya kwakawanda uye chiitiko cheBBQ.
- Nzvimbo diki inokodzera: Injiniya diki zvakakwana kurongedza munzvimbo dziri kure.
- 304 Stainless simbi: Yakagadzirwa kubva kune isina simbi-simbi alloys, inomira yakanyanya kupisa tembiricha yemoto nemazimbe pasina kumbobvira ngura.
- Nyore kushandisa: Minimal kukanganisa dhizaini inokutendera iwe kuve nemoto kana cookout chero kupi pasina kukuvadza pamusoro kana kusiira mashoma trace kumashure.
- Yakachena uye yakapfava: Inopisa huni zvakanaka, ichisiya chete yakasviba-yakanaka dota iyo iri nyore kuchenesa.
Camping Stove Mvura Tangi, Kunze Kwehuni Kunopisa, Musasa Wood Burner, Tende Wood Inopisa Chitofu, Stainless simbi chitofu, Bindu Kubika Chitofu,